‘कथित कारवाही’का बिरुद्ध ५ पत्रकार नेताहरुले विप्लवलाई दिए यस्तो जवाफ, आरोप खण्डन (विज्ञप्तिसहित) — Sanchar Kendra
काठमाडौँ । क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्गठन, नेपालका ५ जना नेताहरुले पार्टी नेतृत्वले नै सङ्गठनको आन्तरिक विवादलाई छताछुल्ल पारेर अपरिपक्क निर्णय गरेको दावी गरेका छन् ।
साथै विज्ञप्तिमार्फत आफूहरुमाथि लादिएको ‘कारवाही’ले अच्चममा परेको भन्दै उनीहरुले आफुहरु नैतिक मुल्यमा विश्वास गर्ने हुदा जबसम्म मानिसको नैतिक तागत उच्च रहन्छ, तबसम्म जस्तासुकै आरोप लगाइए पनि त्यसले अलिकति पनि असर नगर्ने बताएका छन् ।
विज्ञप्तिमा लगाइएका चारवटा आरोपको यसरी खण्डन गरिएको छ
सार्वजनिक रुपमा जिम्मेवार साथीमाथि हातपात गरेको’ आरोपको कुरा गरौ । कुरा लगाउनेले कुन आशय र दुराशय राखेर लगाए तर नेताहरुले यो प्रमाणित गरुन कि कुन ठाउँमा कसले कसमाथि हातपात गरेको हो ? सार्वजनिक ठाउँमा भनेपछि देख्नेहरु पनि होलान । त्यो कुन ‘जिम्मेवार साथी’ हो जसमाथि हातपात भयो, त्यस्तो कोही छ भने ममाथि हातपात भएको हो भनेर उभ्याइयोस् । दोस्रो आरोप सूचना चुहाएको भन्ने छ । यो राजनीतिक पूर्वाग्रह वाहेक केही पनि होइन । कतै केही प्रमाण भए यसलाई पनि पुष्टि गर्न चुनौती दिन्छौ ।
पार्टीका स्थायी समिति सदस्यकै साथमा पार्टी बनेदेखि आजसम्मका सबै दस्तावेज, हिसाबकिताब, सर्कुलर र बैठकमा टिपिएका नोटकपी र ल्यापटप समेत गएको कुरा बाहिर छ्याप्छ्याप्ती आइसकेकै छ । साथै अरु नेताहरुका साथमा पनि धेरै कुरा गएको नेताहरुलाई नै थाहा नै छ । हामी नेताहरुलाई कहिले पनि भेट्दै नभेट्ने र लामो समयदेखि कुनै सम्पर्क नै नभएका कार्यकर्ताले सूचना चुहाएको भन्ने आरोपको कुनै तुक छैन ।
पत्रकार संगठन सम्बन्धि पार्टी निर्णय विरुद्ध अराजकता मच्चाएको’ । यो भनेको क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन, नेपालको बैशाख १५, १६ र १७ मा सम्पन्न तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको सन्दर्भ हुनुपर्छ । दुई सय बढी प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा हामीले संगठनको राष्ट्रिय सम्मेलन प्रदर्शनीमार्गस्थित राष्ट्रिय सभागृहमा गरी नगरकोटमा बन्दशत्र गरेका थियौ । जसको उद्घाटन स्थायी समिति सदस्य सन्तोष बुढा मगरले नै गर्नुभएको थियो ।
सम्मेलन कति मेहनत र दुःखका साथ गरिएको थियो, कति भव्यतापूर्वक सम्पन्न भएको थियो भन्ने कुरा सायद सबैलाई विदितै छ । अनि सम्मेलनको सबै प्रक्रिया सकेर नेतृत्व चयनको प्रक्रियामा पुग्दा कसले अराजकता मच्चाएको थियो भन्ने बन्दशत्रमा सहभागी हुने सबैका सामु दिनको घाम जतिकै छर्लङ्ग छ ।
स्मरण रहोस बाँकी ८ जनामध्ये पनि केही साथीहरु न्यूट्रल हुनुहुन्छ । यसरी दिनको घामजतिकै छर्लङ्ग कुरामा भ्रामक पर्दा हालेर, आन्दोलनमा लागेका साथीहरुमाथि अत्यन्तै निराधार, कपोलकल्पित र तथ्यहीन आरोप लगाउनु, सार्वजनिक रुपमा बेइज्जत गर्ने प्रयास गर्नुका पछाडि कुन स्वार्थ लुकेको छ हामी आश्चर्यमा परेका छौ । त्यस्ता आरोपको कुनै अर्थ छैन ।
निष्काशन तहको कारवाही कमिटीले गर्ने हो कि नेताको विज्ञप्तिले गर्ने हो ? हामीलाई त यो विश्वास नै भइरहेको छैन कि यो कम्युनिस्ट पार्टीको निर्णय हो । पहिलो त सोझै हामीलाई बोलाएर यस्तो कुरा आएको छ के हो भनेर नेताले सोध्नुपथ्र्यो । यदि सोध्न मिलेको थिएन भने सबैका कमिटि थिए भनिएको छ ती कमिटिको बैठक राखेर त्यहाँ छलफल गराइनुपथ्र्यो, त्यो बैठक राख्ने अवस्था पनि थिएन भने ती कमिटिका इन्चार्जहरु थिए होलान, तिनलाई बुझ्न र सोध्न लगाइनुपथ्र्यो ।
नेताहरुलाई लागेको विषयमा स्पष्टिकरण सोध्नुपथ्र्यो । त्यति पनि नभ्याइएको भए आन्तरिक रुपमा सर्कुलर गरेर यिनका बारेमा यस्तो निर्णय भएको छ भनेर पार्टीको आन्तरिक रुपमा गर्नु सायद परिपक्व हुन्थ्यो होला ।